Wasiir ku xigeenka wasaaradda Shaqada ee dhawaan la magacaabay oo maanta xafiiskiisa la wareegay. – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaWasiir ku xigeenka wasaaradda Shaqada ee dhawaan la magacaabay oo maanta xafiiskiisa la wareegay.
Hiiraan Xog, Tani waxay qeyb ka tahay dardar-gelinta howlaha shaqo ee horyaala wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada loogana fadhiyo fulinta waajibaadka loo igmaday.
Wasiir ku xigeenka cusub ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla ayaa shegaay in loo bahan yahay in si mideysan looga wadda shaqeeyo ka mira dhalinta howlaha loo hayo Qaranka.
“Waa inaan masuuliyad gaar ah iska saarnaa sidii aan uga mira dhalin laheyn howlaha Qaranka ee naloo wakiishay”ayuu yiri Mudane Saqar Ibraahim.
Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukumadda Soomaaliya xildhibaan Salax Axmed Jaamac ayaa alle ugu baryay wasiirka inuu u fududeeyo waajibaadka loo igmaday.
Wasiir ku xigeenka ayaa kormeeray qeybaha ay ka kooban tahay wasaaradda isagoo kulan la qaatay howlwadeenada wasaaradda, islamarkaana kula dardaarmay in la hormariyo shaqada loo hayo Bulshada Soomaaliyeed.